Isifundo se-Izimpendulo Ezidakamizweni
Imiphumela eqoqiwe yokuthatha izidakamizwa ingamshiya kanjani umuntu ekhubazekile, noma ngabe kade wayeka ukuzidla.
Amathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa ukusiza umuntu ukuthi ahoxe ngokuphepha kuzidakamizwa
Ukusho ukuthi izidakamizwa seziphenduke inhlupheko enkulu emphakathini akusho ukuthi isimo sinamandla kakhulu. Ayikho ingxenye yokuphila engathinteki kulolubhubhane. Ubugebengu nobudlova yizinto ezisobala, kepha ukuziphatha okubi, ukufundisa okuhoshuliwe futhi, empeleni, izimpilo ezonakele azikho kangako futhi zisabalele.
Futhi inkinga ayikhawulelwanga ezidakamizweni zomgwaqo; imiphumela yezidakamizwa yezokwelapha neyengqondo, noma ngabe amaphilisi ezinhlungu, okokuthomalalisa umzimba noma “ama-anti-depressants,” ayingozi.
U-L. Ron Hubbard wabhekana nalenkinga, hhayi ngenhloso yokuxazulula izinkinga zomzimba zabantu kepha njengokuqhubeka kwesifiso sakhe sokukhulula uMuntu njengomoya nokuphatha, kulomzila, noma isiphi isithiyo esidinga ukuxazululwa. Izidakamizwa zaziyisithiyo esinjalo
Kuze kube yilapho uMnu Hubbard esungula uhlelo olusebenzayo lokuhlunyeleliswa kwezezidakamizwa, sasingekho isixazululo. Izinhlelo eziphefumulelwe ngokwengqondo zibe nokuhluleka okuningi kunempumelelo futhi ezinye zadala ukulutha okubi kakhulu. Abanye abantu, abanezinhloso ezinhle, bathole ukuthi izinhloso ezinhle bezinganele. Bantula ubuchwepheshe obusebenzayo.
Uhlelo lukaMnu Hubbard luhlinzeka lobo buchwepheshe. Ukusuka ekusizeni umuntu athole ukuthi kungani asebenzise izidakamizwa kwasekuqaleni, ukuqeda ukulimala ngokwengqondo nangokomoya okwenziwe yizidakamizwa, ukukhipha ubuthi emzimbeni wezinsalela zesikhathi eside zezidakamizwa, nokunikeza umuntu amathuluzi azomsiza ukuthi angazisebenzisi izidakamizwa. Namuhla, ngokokuqala ngqa, njengoba amakhulu ezinkulungwane ezofakazela, labo abayimilutha yezidakamizwa notshwala bangazikhulula kulobu bushiqela futhi babhekane nokuphila ngomfutho omusha nethemba. Lesi sifundo siqukethe ezinye zezimiso zokuqala zaloluhlelo futhi sinikeza ukuqonda kokuqala kwangempela kwezinkinga zokusebenzisa kabi izidakamizwa.
Amahora eyisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana Izimpendulo Ezidakamizweni
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Izimpendulo Ezidakamizweni, uzothola isitifiketi nge-email.
“Ngibe namalungu amaningana omndeni wami ababa yizigqila zezidakamizwa. Nami ngiye ngaba umlutha we-caffeine noshukela ngezikhathi ezithile empilweni yami. Izidakamizwa zalimaza ikhono lami lokusebenza, ukugxilisa ingqondo nokufunda.
“I-Answers to Drugs Online course ingisizile ukuthi ngiqonde ukuthi kungani abangane bami namalungu omndeni kwesinye isikhathi benza ngendlela abenza ngayo, futhi kungisizile ukuthi ngifunde ukuthi izidakamizwa zikuthinte kanjani ukuziphatha kwami.
“Ngokufunda Impendulo Kwizidakamizweni, Ngifunde indlela yokugwema izidakamizwa, kanye nemiphumela ebuhlungu elethwa yizidakamizwa. Ngithole ukuthi ngijabule ngokwengeziwe, ngisebenza kakhulu, ngiyakwazi ukugxilisa ingqondo, futhi ngiyakujabulela kakhulu ukuphila. Umuzwa omuhle lowo!”
“Ukufunda nokusebenzisa isifundo ze-Answers to Drugs esi-online, ngithole amathuba amabili amahle.
“Esokuqala: funda futhi uthole ukuthi ungazisingatha kanjani izinkinga futhi usize abantu ngezidakamizwa.
“Okwesibili: ithuba lokukhuluma nabantu maqondana nale nkinga.
“Ukwazi, akunzima ukukholelwa ukuthi abantu abaningi abaziswanga ngezidakamizwa kanye nemiphumela yazo ehlobene nemiphumela engemihle. Ngikhulume nabangane abambalwa. Bathe abakaze bazame into efana ne-LSD noma i-heroine. Kepha bayazi, futhi ngiyazi nami, ukuthi kulo nyaka imakethe ye-cocaine iyakhula. I-target enkulu ngabantu abasha abaphakathi kweminyaka ewu-13-17! Bangathola izidakamizwa eduze kwesikole noma ama-disco, epaki noma ezansi nomgwaqo oseduze ne-bar.
“Ngikhulume nawo wonke umuntu mayelana nazo zonke izinhlobo zezidakamizwa. Hhayi kuphela izinhlobo ezingekho emthethweni, kodwa futhi nezisemthethweni: izinto zokufakelwa namaphilisi ezinhlungu. Ngakhuluma nabo nangokuthi kubaluleke kangakanani ukuhlanza umzimba nokuwugcina uhlanzekile.
“Sibonga u-L. Ron Hubbard kanye Nongqongqoshe Bamavolontiya, singasebenzisa amathuluzi asebenzayo ukulwa nezidakamizwa nokusiza abantu.”
“Ku-Answers To Drugs, izixazululo zenye yezinkinga ezinkulu zomphakathi ziyanikezwa. Ngenxa yesimo somphakathi wanamuhla, abantu abaningi ngokwengeziwe bangena ngaphansi kwemiphumela yezidakamizwa, futhi yonke imikhakha yempilo iyathinteka. Kwi-Answers to Drugs, isizathu esiyisisekelo sokuba umlutha wezidakamizwa, noma ukuncika kwizidakamizwa, singatholakala.
“Iphinde ichaze, ngokusobala, imithelela izidakamizwa ezinayo kumsebenzisi, futhi ikhombisa ukuthi izidakamizwa zithikameza kanjani ukusebenza komuntu.
“Ngenhlanhla, ibuye inikeze izixazululo kulezi zinkinga zomphakathi ezidalwa yizidakamizwa. Ngokusetshenziswa kwe-Objective Processing, nezithasiselo zokudla okunempilo njengoba kuchaziwe esifundweni, abasebenzisi bezidakamizwa bangasizwa ngokukhululeka. Lapho sebesizakele ngesikhathi sokuqala sokuzikhipha, bangafundiswa ngokuqhubeka nokusebenza ukusiza ngezizathu eziyisisekelo zokuthatha izidakamizwa.
“Nganginabangane abaningana okwathi, ngosizo lwalesi sifundo, ngakwazi ukufundisa ngemiphumela yezidakamizwa emizimbeni nasezingqondweni zabo. Ngibakhombisile ukuthi empeleni kubasize kanjani okuncane, ngokuphambene nezinkolelo zabo. Ngiphinde ngakwazi ukusebenzisa i-Objective Processing ukubasiza ukuthi banciphise ukuhoxa kwabo, futhi ngisize ukususa leso sifiso sotshwala. Ngamathuluzi engawanikwa kulesi sifundo, ngakwazi ukukhuluma nabangane bami, futhi ngabanikeza amathuluzi okusiza abanye kanye nokubhekana nenkinga enkulu yomphakathi yekhulu lamashumi amabili nanye: izidakamizwa.”